Shintshanisa Ama-imeyili Nezinto Kususwe Yiphutha. Susa ukususa ama-imeyili ku-Exchange Mailbox.
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Susa Izinto Zokushintshana ngephutha
Susa Izinto Zokushintshana ngephutha? DataNumen Exchange Recovery Ungazisusa!
Susa ama-imeyili wokushintshanisa nezinto ngokungenzi kahle:
Uma ususa i-imeyili noma enye into ebhokisini leposi le-Exchange, ngokuchofoza inkinobho ethi "Del", khona-ke izohanjiswa kufolda ethi "Izinto Ezisusiwe". Ungayibuyisela ngokumane ushintshele kufolda ethi "Izinto Ezisusiwe", uthole i-imeyili noma into oyifunayo, bese uyibuyisela endaweni yayo yasekuqaleni noma kwamanye amafolda ajwayelekile.
Kodwa-ke, uma ususa into ye-Exchange njengoba kuchaziwe ezimweni ezintathu ezilandelayo, isuswa unomphela:
Wena noma umphathi nisebenzisa umsebenzi wokususa kanzima (Shift + Del) ukususa into ye-Exchange. Umsebenzi wokususa kanzima uvumela i-Exchange ukuthi isuse into ngaphandle kokuyithumela kufolda ethi “Izinto Ezisusiwe” noma i-Deleted Items Cache lapho impahla Yesilondolozi sezinto ezisusiwe ingavunyelwe.
Wena noma umphathi susa into kufolda ethi "Izinto Ezisusiwe".
Umlawuli ususa ibhokisi leposi engahlosile noma ngisho neseva ye-Exchange uma usebenzisa uhlelo lwe-Microsoft Exchange Administrator. Esimweni esinjalo, i-Exchange isusa unomphela lelo bhokisi leposi noma iseva kusuka enkombeni.
Noma into isuswe unomphela, usengakwazi ukuyibuyisa kusuka kuyo ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (.ost) ifayela elihambisana nebhokisi leposi le-Exchange, njenge- OST ifayela liyikhophi engaxhunyiwe ku-inthanethi yokuqukethwe kwebhokisi leposi kuseva. Futhi kunezimo ezimbili:
Awuvumelanisanga OST ifayela neseva. Uma kunjalo, into esuswe kuseva isekhona kufayela le- OST fayela ngokujwayelekile.
Uvumelanise i OST ifayela neseva. Uma kunjalo, into esuswe kuseva nayo izosuswa kufayela le- OST Ifayela.
Kunoma yisiphi isimo, ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukubuyisa into esusiwe kufayela le- OST ifayela. Kepha ezimweni ezahlukahlukene, ungalindela ukuthola into engasuswanga ezindaweni ezihlukile.
Ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukususa Okususwe Ngunaphakade Izinto Zokushintshana:
Uyacelwa ukuthi wenze okulandelayo ukuthola izinto ezisuswe unomphela ze-Exchange ngezinto DataNumen Exchange Recovery:
Kukhompyutha yakho yangakini, thola ifayela le- OST ifayela elihambisana nebhokisi leposi le-Exchange lapho ufuna ukuyekisa khona izinto. Unganquma indawo yefayela ngokuya ngempahla yayo ekhonjiswe ku-Outlook. Noma sebenzisa Ukucinga ukusebenza kuWindows ukuyifuna. Noma sesha ezindaweni eziningana ezichazwe ngaphambilini.
Vala i-Outlook nanoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza olungangena kufayela le- OST Ifayela.
Khetha OST ifayela litholakale kusinyathelo 1 njengomthombo OST ifayela elizotholwa.
Chofoza u- “Start Buyisa ”inkinobho ukuthola umthombo OST Ifayela. DataNumen Exchange Recovery izoskena futhi ibuyise izinto ezisusiwe emthonjeni OST ifayela, bese uwagcina efayeleni elisha le-Outlook PST ogama lakhe licacisiwe kusinyathelo 5.
Ngemuva kwenqubo yokutakula, ungasebenzisa iMicrosoft Outlook ukuvula okukhiphayo okulungiselelwe ifayela le-PST bese uthola izinto ezingasuswanga. Uma ungakavumelanisi i OST ifayela neseva, lapho-ke ungathola izinto ezingasuswanga ezindaweni zazo zoqobo. Kodwa-ke, uma usuvele uvumelanisile i- OST file, lapho-ke ungathola izinto ezingasuswanga ezindaweni lapho zisuswa khona unomphela. Isibonelo, uma usebenzisa inkinobho ethi “Shift + Del” ukususa i-imeyili unomphela kufolda ye- "Inbox", lapho-ke DataNumen Exchange Recovery izoyibuyisela emuva kufolda ye- "Inbox" ngemuva kwenqubo yokutakula. Uma usebenzisa inkinobho ethi "Del" ukususa le imeyili kufolda ethi "Ibhokisi Lemilayezo Engenayo", bese uyisusa unomphela kufolda ethi "Izinto Ezisusiwe", emva kokululama, izobuyiselwa kufolda "Yezinto ezisusiwe".
Qaphela: Ungathola izinto eziphindiwe ezingasuswe kumafolda e- "Recovered_Groupxxx". Ngicela ungabanaki nje. Ngoba kwesinye isikhathi lapho ususa into ebhokisini lakho leposi le-Exchange bese uyivumelanisa ne OST ifayela, i-Outlook izokwenza amanye amakhophi ayimpinda ngokuphelele. DataNumen Exchange Recovery inamandla amakhulu okuthi ingabuyisa wonke la makhophi afakiwe futhi ibaphathe njengo-lost & Izinto ezitholakele, ezitholwayo bese zifakwa kumafolda abizwa nge- “Recovered_Groupxxx” kufayela le-PST elilungisiwe